HomeHoryaalladaPedro: ‘Saamaxaad Maleh’ Barcelona Hadii Ay Lumiso Fursadan
Laacibka kooxda Barcelona ee Pedro ayaa tilmaamay inaan Barcelona laga saamixin doonin, haddii ay lumiyaan fursadan albaabka ku soo garaacday ee markale ku soo dartay tartanka horyaalnimada La Ligaha, isla markaana ay qaadi waayaan Koobka.
Kadib barbar dhicii naxdinta lahaa ee ay Barcelona 2-2 la dhaafi wayday Getafe oo marti u ahayd, naadiga Blaugrana waxay ka quusteen hirdanka horyaalka , laakiin waxay markale saaxada ku soo noqdeen kadib guuldaradii qabsatay kooxda Hogaanka haysa ee Atletico Madrid oo 2-0 ay kaga badisay Levante , iyo barbarihii lagu qabtay Real Madrid ciyaartii u dambeysay horyaalka ee habeenkii Arbacadii.
Sidaas darteed, Pedro wuxuu indhaha ku hayaa in kooxdiisu haddii ay lumiso fursadan, culayska niyad jabku siyaado ku sii noqon doono.
“Waxaan odhan karaa [tartanka horyaalnimada loogu jiraa] imika waa 50-50, sababtoo ah Atletico waxay haysataa dhibic faa’iido ah laakiin anaguna waxaanu haysanaa gacan saraynta garoonkayaga oo aanu kula ciyaarayno ciyaarta u dambeysa,”ayuu laacibka baasha ka ciyaaraa ku yidhi waregyska Marca.
“Rajo hor leh ayaa daf noo soo tidhi, awood cusub. Imika wax kastaa anaga ayay nagu xidhan yihiin, waxay noqon doontaa mid saamaxaad la’aan ah inaanu ka dhabayn wayno jidka guusha.
“Waxaan haysanaa dhiirigalin iyo niyad fiican kumana guuldaraysan karno. Waxaanu isku dayi doonaa inaanu garaacno Elche kadibna xirfadayada oo dhan ku soo bandhigno dhiirigalinta dhawaaqa taageerayaashada hortooda ciyaarta u dambeysa ee garoonkayaga.
“Degdeg may ahayn hadalkayagii dhawaan aanu ku sheegnay inaan horyaalku suurto gal noo ahayn. Kamaanaan fikirinba in natiijadani soo baxayso. Imika waxaa noo suurto gashay inaanu helno fursad kale waana inaanu siday tahay uga faa’iidaysanaa.’
Van Gaal: Cimiladu wey na saamayn doontaa
Messi Oo Dhex Fadhiya Shaqsiyaadka Fadeexada Dokumentiyada Sirta Ah ee ‘Panama Papers’ Iyo Barca Oo Difaacaysa